किन भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त नेपालीहरु राज्यविहीन महसुस गर्छन् ? | Janprabhabnews
किन भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त नेपालीहरु राज्यविहीन महसुस गर्छन् ?
27th October 2020 , 1:05 मा प्रकाशित
उनको जम्म नेपालमा भएको हो । उनले (आग्रहमा नाम नराखिएको) भारतको गोर्खा रेजिमेन्टमा झण्डै २८ वर्ष काम गरे र सुवेदारबाट अवकाश पाए । तर, यतिबेला उनले आफू राज्यविहीन भएको महसुस गरिरहेका छन् ।
१७ वर्षदेखि ३४ वर्षसम्म भारतीय सेनामा नै बिताउने भएकाले उनीहरु भारतमा नै बस्न चाहन्छन् । किनकि, उनीहरुका परिवार नै भारतमा हुन्छन् । यसले गर्दा उनीहरुमध्ये धेरैले आफूलाई राज्यविहीन भएको महसुससमेत गर्छन् उनीहरु नेपाल फर्केर आउने कुनै आधार छैन । तर, भारतको नागरिकता लिने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, बेलायत र भारतका वीचमा सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, जसले नेपाली गोर्खा बेलायत र भारतको सेनामा भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो । सम्झौतापछि १० गोर्खा पल्टनमध्ये ६ वटा भारतसँग रह्यो र चारवटा बिटिस सेनासँग रह्यो । सो सम्झौतापछि केही गोर्खाले बेलायती सेना भर्ना हुन इन्कार गरे र उनीहरुका लागि भारतले ११ गोर्खा राइफल्स बनाउने निर्णय लियो ।